भ्यालेन्टाइनको आ–आफ्नै योजना - भ्यालेन्टाइन डे - साप्ताहिक
भ्यालेन्टाइनमा के छ प्लान ?’ लोलाङ हाइट, बालाजु, काठमाडौंकी सृष्टि चित्रकारसँग सोधियो ।
‘खासै प्लान छैन,’ हँसिलो चेहरा भएकी सृष्टिले मुख खोलिन्, ‘यो भ्यालेन्टाइन डे किन आयो जस्तो लाग्छ ।’
सामाखुसीस्थित लिंकन कलेजमा प्लस टुमा अध्ययनरत सृष्टिलाई कसैले रोज र चकलेट दिइहाल्यो भने के गर्लिन् ? ‘चकलेटजति खान्छु ।’ उनले रमाइलो जवाफ फर्काइन्, ‘रोज भने लिन्नँ ।’
हाल ‘सिंगल स्टाटस’ मा रहेकी सृष्टि भ्यालेन्टाइन डे, रोज डे, चकलेट डेजस्ता स्पेशल डेहरू मनाउन खासै रुचाउँदिनन् । बरु सामान्य दिनहरूमा बढी रमाइलो गर्छिन् । कसैसँग क्याफे वा रेस्टुराँ जाने मुडमा पनि छैनन् उनी । उनका साथीहरूले बेलाबेला आफ्ना प्रेमका कथा सुनाइरहन्छन् । उनलाई त्यस्ता किस्सा सुन्न भने खुब रमाइलो लाग्छ ।
सृष्टिभन्दा अलि फरक विचार छ, उनकै उमेर र एउटै तहमा अध्ययनरत बालाजुकी मैना बस्नेतको । मैनाको विचारमा भ्यालेन्टाइन डे आफैंमा नराम्रो होइन । यो प्रेम बाँड्ने दिन हो । यसलाई सकारात्मक नजरले हेर्नुपर्छ । ‘भ्यालेन्टाइन डे कपलहरूले मात्र मनाउने होइन ।’ मैनाले सुनाइन्, ‘साथीभाइ, परिवार, आफन्तहरूसँग पनि मनाउन सकिन्छ ।’ ‘प्रेम के हो ?’ प्रश्न खस्न नपाउँदै उनले फ्याट्ट भनिन्, ‘प्रेम अनुभूति हो, जुन मनैदेखि हुनुपर्छ ।’ प्रेम प्रस्ताव राख्दा अर्को पक्षले स्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने लाग्दैन उनलाई । प्लस टु सकेपछि मात्र केटा साथी बनाउने चक्करमा लाग्ने उनको मनसाय छ।
सृष्टि र मैनाकी साथी रोमा तामाङ विगत डेढ वर्षदेखि कसैसँग रिलेसनसिपमा छिन् । यो कुराबाट दुवैतर्फको परिवार जानाकार छ । एक प्रकारले भविष्यमा विवाह गर्ने योजना पनि बनिसकेको छ, तर उनले अझै आफूले प्रेम गरेको व्यक्तिसँग भ्यालेन्टाइन डे मनाएकी छैनन् । भ्यालेन्टाइन डे भन्नेबित्तिकै उनको मनमा केही दृश्य आउँछन् । जोडीहरू भेट्ने, सँगै घुम्ने, पार्क जाने, उपहार साटासाट गर्ने, गुलाब र चकलेट दिने यस्तै–यस्तै । उनको मनमा पनि यस्तै रहरहरू छन्, तर खुलेर सेलिब्रेट गर्न भने पाएकी छैनन् ।
सृष्टि, मैना अनि रोमासँगै भ्यालेन्टाइन बहसमा छन्— उनीहरूका सहपाठी आर्यन कर्ण र विजय रेग्मी । जनकपुर स्थायी ठेगाना भएका कर्णले अहिलेसम्म भ्यालेन्टाइन डे मनाएका छैनन्, तर यसपालि आफ्नो भ्यालेन्टाइन भेटिने आशा छ उनमा । भविष्यमा ‘असई’ बन्ने रहर पालेका कर्ण केटाकेटीबीच मात्र होइन, सबैसँग प्रेम हुने बताउँछन् ।
प्रेम एकतर्फी होइन, दुईतर्फी हुने उनको ठम्याइ छ । कस्ती केटी साथीको खोजीमा छन् त उनी ? ‘मन मिल्ने, सुख–दु:खमा साथ दिने ।’ प्लस टुमा अध्ययनरत कर्णले सुनाए, ‘जसले पछि छाडेर नजाओस् ।’ गोरखा बोर्लाङका विजय रेग्मी पनि भ्यालेन्टाइन डे मनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छन् । फुटबल खेल्न र क्रिकेट हेर्न रुचाउने रेग्मी राम्री केटी साथी बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा छन् । हाल बानियाँटारमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका आर्यनले रमाइलो पारामा जवाफ दिए, ‘सबै केटी राम्रा हुँदैनन्, राम्रा जति हाम्रा हुँदैनन् ।’ आफूले प्रेम गरेकी केटीसँगै विवाह पनि होस् भन्ने चाहना छ उनको।
केटीहरू आफ्नो भ्यालेन्टाइन कस्तो होस् भन्ने चाहन्छन् वा कस्ता केटा रुचाउँछन् ?
‘उचाइ र उमेर हेरेर होइन ।’ सृष्टि भन्छिन्— ‘विश्वासिलो र मलाई बुझ्ने खालको हुनुपर्‍यो ।’ धनी नभए पनि संघर्ष गर्ने, आफूलाई सधैं साथ दिने मान्छेको खोजीमा छिन् उनी । आफूले रोजेको केटा साथीलाई नै जीवनसाथी बनाउने सोच छ उनको । मैनालाई भने नेपालीभन्दा ‘विदेशी केटा साथी’ बनाउने रहर छ । ‘किन हो किन मलाई विदेशी केटासँग सम्बन्ध गाँस्न मन लाग्छ ।’ उनले खुलेरै सुनाइन्– ‘फरक संस्कृति एवं भाषा सिक्न पाइन्छ ।’ अहिलेसम्म कुनै केटाले आफूलाई प्रेम प्रस्ताव नराखेको उनले बताइन् । कसैलाई आफ्नो ब्वाइफ्रेन्ड बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मैनाको नजरमा अहिलेसम्म कोही परेनन् । यसपालि भ्यालेन्टाइन डेमा कसैले प्रस्ताव राख्यो भने ? ‘कसैले त्यस्तो सोच राखेको छ भने ऊ आफैं जिल्ल पर्नेछ ।’ उनले हाँसेरै जवाफ फकाईन् । कसैले प्रेम
प्रस्ताव राख्दा स्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने उनलाई लाग्दैन ।
रोमालाई रिसाउने तथा झर्किने खालका केटा मन पर्दैनन् । उनको नजरमा केटा साथी हुनुका सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्, तर आपसी समझदारी भने हुनुपर्छ । ‘आफूसँग कोही हँुदा आड–भरोसा मिल्छ ।’ रोमाले भनिन्, ‘पछुतो लाग्दैन ।’ साथीहरूसँग घुम्न जाँदा भने उनी दोधारमा पर्छिन् । उनको ब्वाइफ्रेन्ड आफैंसँग घुमोस् भन्ने चाहन्छिन् । रोमा समूहमा घुम्न बढी रुचाउँछिन् । ‘यो उमेरै त्यस्तो नि ।’ शून्य दशमलव २ पावर भएको चस्मा लगाएकी रोमाका अनुसार— ‘जून हेरे जून राम्रो, घाम हेरे घाम राम्रो ।’ प्रेमका मामिलामा परिवारको राम्रो साथ पाएपछि उनी ढुक्क छिन् । घरबाट उनलाई सम्झाए– एउटै मन हो, एउटालाई दिनु । यति सुनेपछि उनलाई धेरै सोचिरहन मन लागेन ।